Ciidamada Itoobiya oo Laga Xureeyay Degmada Ceel-garas iyo Deegaanka Ceel-lahele,Al Shabaab oo Dib Ulawareegay.
Saturday September 13, 2014 - 11:47:25 in Wararka by Super Admin
Kadib dagaallo culus oo xalay saqdii dhexe ka bilaawday magaalada Ceelgaras ee wilaayada Galguduud ayay ciidamada mujaahidiinta usuurtagashay in ay dib uqabsadaan degmada.
Ciidamada Al Shabaab waxay bilaabee in ay soo duulayaasha ka Eryaan magaalooyinka uu qabsaday
Wararka ka imaanaya Ceelgaras ayaa sheegaya in dagaallo saacado badan qaatay ay ka bilaawdeen gudaha degmada oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen ciidamada gumeysiga Itoobiya.
Dagaalka waxaa ka qeyb qaadanayay gaadiidka Tiknikada shabaabul Mujaahidiin,daryanka rasaasta iyo madaafiic xooggan oo lays dhaafsanayay ayaa laga maqlayay magaalada Dhuusamareeb oo 40 KM ujirta Ceelgaras.
Wariye ku sugan Galguduud ayaa SomaliMeMo uxaqiijiyay in ciidanka Itoobiya lagu jebiyay dagaalka kadibna ay ucarareen dhanka Dhuusamareeb.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada muslimiintu ay gudaha ugaleen degmada taasi oo ka dhigan in mujaahidiinta Al Shabaab ay gumeystaha ka xureeyeen magaalada.
Dhinaca kale ciidamada Itoobiya ayaa maanta duhurkii isaga baxay deegaanka Ceel-lahele ee duleedka Ceelgaras iyadoo wax dagaal ah aysan dhicin,sarkaal katirsan wilaayada Islaamiga Galguduud ayaa SomaliMeMo u xaqiijiyay in ciidankoodu ay si buuxda ula wareegeen dhammaan deegaanadii cadawga laga xureeyay.
Waa Magaaladii ugu horreysay ee shabaabul Mujaahidiin qabsadaan tan iyo markii uu Shahiiday Sheekh Mukhtaar Abuu Zubeyr Amiirkii Mujaahidiinta Soomaaliya waxaana muuqata in dilka Abuu Zubeyr uusan wax saameyn ah ku yeelan halganka jihaadiga ah ee Soomaaliya ka socda.